Nhazi ígwè, Ngwongwo ígwè, Mgbachi Mgbochi ígwè - Honghua
Nweta ihe nlele anyị ugbu a!
Ele ndị ọzọ Ngwaahịa anyị
Inwe nke mbụ na klas iru eru maka ígwè Ọdịdị n'ichepụta ke China.
Ọrụ ndị ahịa, afọ ojuju ndị ahịa
A na-ejikọ ụlọ nkwakọba ihe ígwè na usoro nchara ígwè, gụnyere ogidi ígwè, ogwe igwe, purlin na ihe ndị ọzọ. Ihe ndị a bụ isi mejupụtara usoro nkwakọba ihe. N'ihi ibu dị mfe na ịrụ ọrụ dị mfe, a na-achọ nnukwu ụlọ nkwakọba ihe ígwè. Nchara strucutre bụkwa nke kachasị ...
Steel ọkpụkpụ nke multi-akụkọ ụlọ ke She ... 2020-04-01
Steel igbe girder nke onye ji ụkwụ agafe agafe b ... 2020-04-01
Oghere Portal. Oghere Portal bụ akụkụ dịkarịsịrị ala, gụnyere ogidi na ntanetị ma ọ bụ ntụhie nwere oghere, jikọtara site na iguzogide oge ...
Ogwe osisi bụ usoro ụlọ nke nwere "ọkpụkpụ ọkpụkpụ" nke ogidi nchara kwụ ọtọ na osisi I-kwụ ọtọ, nke e wuru na ntanetị akụkụ anọ na ...
Maka nchara nchara nwere ọtụtụ uru. Nke mbu, ike di elu. Ogo dị elu nke ike na ibu (ike kwa ibu). Nke abuo ...